तपाईंको अर्को सफा पानामा
आत्म-खेती, लक्ष्य सेटिंग
तिमी मेरो लेख किन पढ्दै हुनुहुन्छ? किन म यहाँ छु?
किनभने म फेरि माथि पुरानो लिन निर्णय गरे। नयाँ साइट, नयाँ लेख: थप ठीक यो नयाँ छ।
म लेख्न प्रेम। शायद यो सबैका लागि रोचक छ। कसैले पारिवारिक सम्बन्ध subtleties बारेमा कसैले गर्न व्यापार पढ्न चाहन्छ। समय म यसको बारेमा लेख्न हुनेछ, आउनेछ।
तपाईं फिर्ता जीवनमा आएको थाहा - यो हास्यास्पद छ। हरेक प्रयास थकित छ, तर सेना कहीं लिइएका हुन्।
यो उपयोगी छ। तपाईंको "कागज को सफा पाना" प्रत्येक mukulaturu जान्छ। तर तपाईं आदान प्रदान यो mukulaturu, र आफ्नो "सफा पानाहरू" एक पटक आफूलाई सफाइ।
बाँच्न कहाँ सुरु गर्ने?
माथि प्राप्त गर्न प्रारम्भिक 1. सुरु गर्नुहोस्। सायद तपाईं र त हरेक बिहान, एक हार्दिक, अझै सामाजिक सञ्जाल मा आधा रात बस्न प्रयोग गरिन्छ गर्नेहरूलाई, र बिहान सुत्ने बन्द - यो खराब बानी फ्याँक्नुहोस्।
2. बाहिर काम। तपाईंले यो वाक्यांश सुन्नुभएको छ? हो, म अक्सर लाग्छ। र चलाउन पहिलो दिन देखि हुन छैन, थकान आफूलाई पीडा गर्न वजन उचाल्न। बस घरमा एक prblemnuyu क्षेत्र चयन गर्नुहोस्, व्यायाम को एक सेट उठाउनुहोस् र तरिकामा, बिस्तारै, तर हरेक दिन।
3. आफु को लागि हेरविचार। म त्यो समय वर्तमान छैन बुझ्न, तर तपाईं महसुस हुँदा राम्रो-groomed - सुखी तरिका हुन्छ। सबै सम्भव हालतमा खरिद पसलमा चलाउन आवश्यक छैन। तपाईं एक शवर, धब्बा क्रीम के लिन र dezodarantom हुन कुरा हो छिडकना। परम्परागत व्यञ्जनहरु प्रयास गर्नुहोस्, यी विषयहरू मा लेख पढ्नुहोस्। आफ्नो शरीर को बारे मा भूल छैन।
4 रद्दीटोकरीमा बाहिर निकाल। यो यस्तो सुन्दर मनोचिकित्सा छ। हो कागज हरेक स्क्रैप फिर्ता सम्झनाहरु ल्याउँछ। तर यी टुक्रा हेर्न र जीवनको सामान्य सफाई गर्दा छोड्न। नयाँ नोटबुक, एक डायरी प्राप्त, एक समय तालिका बनाउन। रद्दीटोकरीमा टाढा बर्बाद।
5 कुनै पनि भोजन गर्न संलग्नहरू नगर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, म साँच्चै रोटी मन, र जब म स्वादिष्ट केहि पसलमा जाने - एउटा कारण सधैं तिनीहरूलाई खरीद राख्न। हुनत कुराहरू धेरै अझै प्रयास छैन। यो वास्तवमा हानिकारक छ। तपाईं आफैलाई व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ हरेक समय - विभिन्न boluyte।
6 हरेक दिन, यदि सम्भव छ भने, एक नयाँ फिल्म हेर्न। एक दिन तपाईं आफ्नो जीवन परिवर्तन हुनेछ एक पतन हुनेछ।
7 नृत्य। यदि तपाईंलाई कसरी थाहा छैन - नृत्य, म तपाईंसँग प्रार्थना गर्छु! कम से कम5मिनेट एक दिन।
र यो सबै हरेक दिन गर्न असम्भव छ भन्ने देखिन्छ। जस्तै, म काम धेरै छ र त्यहाँ कुनै विचार छ।
केहि सम्भव छ।
तपाईंको "सफा पाना" सानो हुन सक्छ, तर तपाईंले आफ्नो जीवन लेखन परिवर्तन गर्न contrive यदि rewritten गर्न धेरै छ र साथै, तस्वीर आकर्षित गर्न।
ओह हाँ, र भूल छैन: प्रत्येक लाइन को अन्त मा एक स्माइली अनुहार राखे। अर्को शब्दमा - हरेक दिन मुस्कान।
के वजन गर्न आइतबार गर्नुपर्छ हप्ताको भर?
के रमाइलो भएको थियो त्यसैले तपाईं गरेको गर्नको लागि यो गर्मी चाहिन्छ?
राम्रो कामहरू एउटा सानो सूची: दुनिया परिवर्तन गर्ने माध्यमहरू
स्टाइलिस्ट र प्लास्टिक बिना उपस्थिति कसरी परिवर्तन गर्न
जाँच प्रशस्त - नमूना र सुविधाहरू भर्न
किन यी चिनियाँ thinkers थाहा गर्नुपर्छ?
उच्च-yielding आलु Skarb: विविधता को विवरण
मेटल डिटेक्टर मिनिलब जानुहोस् 60 - प्रयोगकर्ता समीक्षा र सुविधाहरू
GTA4को संरक्षण जहाँ
सपना व्याख्या: जहाज सपना, त्यसपछि यो वृद्धि हासिल गर्न सक्षम हुनेछ
एक नवजात spokes लागि सुन्दर ब्लाउज सजिलै र चाँडै फिट
ओरेनबर्ग को कलेज: एक संक्षिप्त विवरण
कारणहरू र उपचार: हातमा मा नङ को बन्डल
एक सुन्दर कस्मेटिक उत्पादन - सिरका लागि सिरका
खाना बर्बाद बेसिन को Crushers: प्रकार को एक सिंहावलोकन, जडान, मर्मत